Ahoana no Mampiaraka dia atao ao Shina - Ny LAHATSARY amin'ny CHAT maneran-tany! Ny firenena rehetra, vahiny, ny tontolo izao.
Ahoana no Mampiaraka dia atao ao Shina
Amin'ny teny hafa, tsy misy fanampiny tsindry
Vao haingana izay, dia manana fanontaniana maromaro momba ny fivoriana ao ShinaIzany no mahaliana ny lohahevitra mikasika izay mitranga ao maro manan-danja ara-kolontsaina teboka ny fifandraisana, noho izany aho dia te-hiresaka momba izany mandritra ny minitra vitsivitsy. Zava-mahazatra ny maheno olona milaza fa ny fahasamihafana ara-kolontsaina no overrated na tsy araka ny maha-izy taloha, ka na dia misy ny antony tsy mba mino fa ny fahasamihafana ara-kolontsaina dia tsy tokony ho nalaim-baraka izy ireo, satria tena misy. Ny iray amin'ireo olana manan-danja eto dia ny hoe ny Sinoa ny vehivavy, betsaka kokoa ny fanamafisana dia napetraka teo am-piandohan'ny ny fanambadiana. Io indray mandeha mba tsy marin-toerana ny fotoana, rehefa fanambadiana dia midika be dia be ny ilaina ny fiarovana, mazava ho azy fa izany dia tsy midika fotsiny Shinoa malaza: Amerikana ny vehivavy izay manambady alohan'ny tonga olon-dehibe, fa ny lalana miverina dia mihoatra noho ny saina. Shina dia somary vaovao ny rehetra amin'izao fotoana izao ny stably-globalized Aterineto (mbola miasa, izany ny farany, ny tena) zavatra ao amin'ny firenena, ary raha ny kolontsaina dia ny, ny taona taty aoriana, fahazarana taloha maty mafy. Diniho koa ny fanontaniana ny taranaka izay anjara eto: ny vehivavy tsara tarehy izay efa tsy voafehy tsy misy ray aman-dreny, dadabe sy bebe, dia ny iray izay mametraka izany tsindry mahazo manambady, na dia ny tenanao mba tsy ho vonona na liana. Izany dia satria ny ray aman-drenibe, ary mety (arakaraka ny toerana misy anao ao Shina) mbola manan-danja ny fianakaviana fahamarinan-toerana, indrindra fa eo amin'ny fotoana, noho ny tsy fahamarinan-toerana sy ny volatility ny fotoana. Raha ny tena izy, aho, raha vao mitondra ny datin ny zazavavy izay tsy nisy afa-tsy any amin'ny toerana izay ny ray aman-dreniny sy ny renibeny efa nankasitraka, satria azonao an-tsaina fa tsy misy ireo toerana ireo no tena mampihomehy. Ny vehivavy taranaka dia afaka ny ho tsara ny manana ny voalohany manana tantaram-pitiavana fahafahana misafidy, ary izany no zavatra tokony hotadidintsika rehefa hanapa-kevitra ho an'ny ny fifandraisana - izany fotsiny tsy iray taonina ny ara-kolontsaina koa averiko aminao fa afaka lavo indray. Tsarovy: raha ianao no mieritreritra ny zavatra tokony hatao eo amin'ny lafiny fifandraisana, aza mampiasa ny ray aman-dreny, ny fanambadiana, ary na ny fifandraisana amin'ny maha-mpitari-dalana. Raha Ny ray aman-dreny sy ny hafa ao amin'ny fianakaviana no mahazo manambady fa tsy hanahirana, fa tsy olon-tiany, tsy dia misy zavatra betsaka mba hanampiana Anao hahita tantaram-pitiavana mpiara-miasa, izay raha ny marina Dia afaka ho nifandray. Toy izany koa ny zazavavy voalaza tetsy aloha aho - ny ray aman-dreny ny fanambadiana dia nalamin'i ny ray mandidy manamboninahitra ao amin'ny tafika, ary mangataka anareo aho indraindray, mino ve ianao fa tokony hihaino ny Fiarahana toro-hevitra avy amin'ny olona izay tsy mbola nihaona? Matetika izany no mitarika ho amin'ny zava-tsarotra mahakasika ny ray aman-dreny eo amin'ny fifandraisana sy ny Fiarahana.
Mety ho efa namaky ny momba ny mampatahotra fampakaram-bady tsena any Shina, izay ny ray aman-dreny nametraka latabatra latabatra, ny dokam-barotra ny olon-dehibe ny lahy sy ny vavy mba mety ho mpiara-miombon'antoka.
Na raha ny marina dia ny ankamaroan'ny Shinoa tsy mahalala ny hoavy vady tsara, ny fanambadiana ny tsena dia mbola tena fahita, na dia amin'ny Tandrefana tanàna tahaka an'i Shanghai. Raha ny eo amin'ny Andrefana dia afaka miezaka ny mody mba ho tony sy tsy ho amin'ny fifandraisana tsy tapaka amin'ny olona iray, ao Shina, izany no fanao ny mandefa hafatra an-tsoratra na miantso im-betsaka isan'andro, na dia ny fifandraisana no tsy dia lavitra lehibe. Izany indrindra ara-kolontsaina samy hafa, amin'ny zavatra niainako, no antony lehibe nahoana no maro ny hazo fijaliana-kolontsaina ny fifandraisana tsy. Fantatro fa tovovavy iray nihaona texted ahy in-dimy talohan'ny sakafo antoandro ny andro manaraka - matotra tsy ho ahy, fa ny fitsipika momba ny paika ho anao. Ny olona matetika no manao ny rehetra ny fanapahan-kevitra amin'ny teny Sinoa ny fiarahana, ary ny ankizivavy sasany handray izany ho tena zava-dehibe.
Indray mandeha aho dia nanontany ny ankizivavy izay te hanao ao ny daty sy ny tsy namaly.
Koa dia nanaiky mitondra ny namana miaraka aminao, nefa tsy ho amin'ny avo roa heny ny daty - tena bebe kokoa ho toy ny rahalahy, ny tampon, na ny fiarovana amin'ny moka. Na ahoana na ahoana, izany rehetra izany dia midika fa ao Shina, na raha toa ianao ka ny Fiarahana amin'ny olona iray ho an'ny tena, ny fampakaram-bady dia farafaharatsiny ny eo ambony latabatra. Dia raha tsy izay zava-dehibe ho azy manokana, dia mbola manana zavatra ao an-tsainy, ary ny ray aman-dreniny dia afa-manarina ny fotoana rehetra izy mahita azy ireo. Noho izany, mialoha ny fanambadiana ny firaisana ara-nofo be dia vitsy tao Shina noho ny any Andrefana, na dia tsy betsaka amin'ny tanora, urbanized Shinoa. Ny zava-misy dia, na izany aza, fa raha mitady mpiara-miasa amin'ny firaisana ara-nofo, dia misy mafy fiheverana fa ny fanambadiana eo amin'ny faravodilanitra. Na dia ireo fitsipika ireo indraindray mandefitra kokoa ho an'ny Sinoa izay daty vahiny, izany dia tsy ho foana ny raharaha.
Ho an'ny lehilahy, zavatra izay mazàna ho hentitra: tsy tia countdown ny fanambadiana lany daty (fantatra ihany koa amin'ny hoe matetika no tranga voarakitra ny"sisa tavela amin'ny vehivavy", sy ny faneren'ny fianakaviana mitady ho kely kokoa noho ny azy ireo vehivavy mpiara-miasa aminy.
Niresaka momba ny hetra takiana fa ny lehilahy matetika no mihaona mba ho mendrika ny tsara mpiara-miasa: ny trano, ny fiara, sy ny asa maharitra dia de facto Mampiaraka fepetra takiana amin'ny maro ny faribolana, ary amin'ny lahy sy ny vavy tsy fifandanjan'ny ny maro tapitrisa fanampiny ny lehilahy, ny vehivavy dia afaka matetika manam-bola loatra ho sarotiny. Manana namana iray aho izay, rehefa izy no Mampiaraka ny Shinoa lehilahy, voalaza fa izy dia tsy tena miraharaha raha mba nanana fiara na tsy. Ny daty ara-bakiteny tsy mino ny vintana ary avy hatrany dia niezaka nametraka ny fotoana ho daty hafa. Amin'ny Ankapobeny, ny kolontsaina fanamafisana tany am-boalohany ny fanambadiana, indrindra fa ho an'ny vehivavy, dia midika fa ny Fiarahana no tena manan-danja kokoa, ary tokony tsy ho raisina ho afa-maina. Izao fa anao hahafantatra kely ny momba ny Fiarahana kolontsaina tao Shina, dia jereo hoe inona ilay Shinoa maintsy lazaiko momba ny tantaram-pitiavana tsara mpiara-miasa. Ireo YOYO Shinoa lesona iray kafa mazava ho azy fa amin'ny dinidinika amin'ny olona eny an-dalambe ao Shina. Rehefa fohy ireo tafa sy dinika, Yang Yang mizara ny tena fiteny hevitra hita ao ny valiny. Michael HURWITZ nandritra ny enin-taona tao Shanghai manao zavatra kely mba hanampy ny tetezana ny kolontsaina sy ny fiteny elanelana misy eo amin'i Shina sy ny Tandrefana. Hiverina any ETAZONIA hianatra ny raharaham-barotra, Sinoa Michael tia mozika reggae, ny toerana niaviany ekipan'ny basketball, Washington Mitsiatsiaka, ary manana vitsivitsy ny tombokavatsa fa aleony tsy mba hazavao. Ampidiro ny feo isa isaky ny Pinyin izy, ary avy eo dia tsindrio ny fiovam-po bokotra hanova azy ireo feo hanova ny etikety.
lahatsary amin'ny chat room amin'ny ankizivavy maimaim-poana amin'ny aterineto
Chat en directo Valparaiso Coñecer mulleres e homes en
ny lahatsary amin'ny chat tsy misy fisoratana anarana sy maimaim-poana Mampiaraka toerana afaka mihaona ny tovovavy ho an'ny Fiarahana lahatsary sary tsy misy fisoratana anarana Fiarahana tsy misy fisoratana anarana maimaim-poana izay mba hihaona ny tovovavy online chat amin'ny zazavavy Mampiaraka maimaim-poana ho an'ny fifandraisana matotra izay mba nahalala ny Fiarahana amin'ny aterineto